Akukho Tsunami emva kwenyikima engu-6.80 eChile
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Akukho Tsunami emva kwenyikima engu-6.80 eChile
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseChile zokuPhula • iindaba • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Inyikima esemthethweni yase-US yenyikima isilumkiso malunga netsunami enokubakho kuloo mmandla. Esi silumkiso sarhoxiswa kamva emva kwenyikima eyomeleleyo eyi-6.8 yabetha i-223 km N ye I-Coquimbo
ICoquimbo sisixeko esikwizibuko, idolophu kunye nenkunzi yePhondo i-Elqui, ebekwe kwiPan-American Highway, kwiNgingqi yaseCoquimbo eChile. ICoquimbo imi kwintlambo eyi-10 km emazantsi eLa Serena, apho yenza iGreater La Serena enabemi abangaphezu kwama-400,000.
Akukho ngxelo ngomonakalo omkhulu okanye ukwenzakala okwaziwayo. Inyikima yagungqisa iChile emva kwexesha lobusuku.